Ogaden News Agency (ONA) – Baarlamaanka Masar oo Diiday in Uu Lakulmo Raysalwasaaraha Itoobiya.
Baarlamaanka Masar oo Diiday in Uu Lakulmo Raysalwasaaraha Itoobiya.
Posted by Dulmane	/ December 5, 2017
Wararka naga soo gaadhaya magaalada Qahira ee caasimada wadanka Masar ayaa sheegaya in ay baarlamaanka wadanka Masar gaashaanka u daruureen in uu uyimaado Raysalwasaare kusheega Itoobiya, Hailemarim Desaleng.
Sida xogta aan kuhelayno fadhi uu yeeshay baarlamaanka wadanka Masar ayaa lagaga hadlay codsi uga yimid dhinaca xukuumada wayaanaha, kaas oo ladoonayay in Hailemarim Desaleng uu gaadho magaalada Qahira si uu uga khudbadeeyo fadhiga baarlamaanka Wadanka Masar.
Hase yeeshee baarlamaanka wadanka masar ayaa cod aqlabiyad ah kudiiday in uu Desaleng yimaado magaalada Qahiro isla markaana uu baarlamaanka Masar hortiisa kasheego balan qaadyo been ah iyo marin habaabin hor leh oo lamarin habaabiyo shacabka Masaarida.
Sida lagu daabacay jariirada kasoo baxda wadanka Masar ee Egypt Independent waxaa go’aankan qaatay inta badan baarlamaanka wadanka Masar, sida uu sheegay afhayeenka baarlamaanka ee wadanka Masar, oo fadhi yeeshay maalinimadii shalay oo Isniin ahayd.
Labada wadan ee Masar iyo Itoobiya ayaa isku maan dhaafsan biyo xidheenka wabiga Nile oo ay Itoobiya samaysay, talaabadaas oo shacabka Masarida ku ah dhibaato aad ubadan, taas oo lagu tilmaamay wax aysan dadka Masarida ah aqbli karin.
Itoobiya ayaa dhankeeda Dowlada Masar ku eedaysay in ay kadambayso kacdoomada kajira gudaha Itoobiya, sheegashadaas oo dowlada Masar ay kusheegtay been lasoo dhoob dhoobay.
Dadka arimaha siyaasada wadamada Africa falanqeeya ayaa sheegaya in ay kacabsi qabaan dagaal lagu hoobto oo labada wadan dhex mara waa hadii ay xukuumada Itoobiya kawaan toobi waydo biyo xidheenka ay kasamaynayso wabiga Nile.